सप्तरी प्रीमियर लिग, दोश्रो दिन : रुपनी राइडर्स र डाक्नेश्वरी ड्रागन बिजयी | Cricket Himalaya |
By Bhanu Sigdel Last updated Jun 18, 2019 215 0
सप्तरीको राजविराजमा जारि मेयर कप सप्तरी प्रिमियर लिग-२ प्रतियोगिता अन्तर्गत दोश्रो दिनको खेलहरुमा रुपनी राइडर्स र डाक्नेश्वरी ड्रागनले जित हाँसिल गरेको छ।
पहिलो खेल : रुपनी राइडर्स र तिलाठी कोइलाडि
रुपनी राइडर्सले तिलाठी कोइलाडी जायन्टसलाई ५ रनले पराजित गरेको छ।
वर्षाको कारण खेल ५/५ ओभरमा छोट्याएर खेलाइएको थियो।
टस हारेर ब्याटिंग गरेको रुपनी राइडर्सले निर्धारित ५ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ३२ रनको योगफल तयार गरेको थियो। मेहबुब आलमले सर्वाधिक १० रन बनाएका थिए !
तिलाठी कोइलाडीका बलर अनिल यादबले ३ विकेट , रोहित सिंहले २ विकेट तथा कमल ओलीले १ विकेट लिएका थिए !
लक्ष्य पछ्याएको तिलाठी कोइलाडीले ५ ओभरमा मात्र २७ रन बनाउन सक्यो। सुनिल धमला र कप्तान रोहन बिक क्रमशः ११ र १२ रनमा अविजित रहे पनि जित दिलाउन सकेनन्।
दोश्रो खेल : बोडे बर्साइन थन्डर्स र दक्नेश्वरी ड्रागन
सुरुमा ब्याटिङ गरेको बोडेले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै ११८ रन बनाएको थियो ! पवन दासले १९ बलमा १५, मन्जित श्रेष्ठले २१ बलमा २४, अमीत यादबले ८ बलमा १३, मुकुन्द यादबले ११ बलमा २० , आदर्श यादबले ११ बलमा रन बनाएका थिए !
दक्नेश्वरिका लागि चित्र बहादुर बिस्ट, रोबिन सिंह, दिपेस कडेलले समान २/२ विकेट, पुश्प थापा र राहुल मन्डलले १/१ विकेट लिएका थिए !
लक्ष पछ्याएको दक्नेश्वरिले १८ ओभरमा ३ विकेट गुमाउदै १२३ रन बनाएपछि सहज ७ विकेटको जित हात पार्यो ! अबिनास कर्णले १५ बलमा १७, राहुल मन्डलले १३ बलमा १३, विशाल सुसलिङले ४२ बलमा ३५*, दिपेस कडेलले २४ बलमा २४, पुश्प थापाले १४ बलमा २९* रन बनाएका थिए !
बोडेका लागि मिनस थापा, ओपेन राई, मन्जित श्रेष्ठले समान १/१ विकेट लिएका थिए !
दिपेस कडेल प्लेयर अफ द म्याच भएका थिए !
अंकतालिकामा उत्कृस्ट हुने २ टिमले असार ८ गते फाइनल खेल्नेछ। लिगको विजेता टिमले २ लाख तथा उप-विजेताले १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
प्रतियोगिता असार २ देखि ८ गतेसम्म संचालन हुनेछ।
लक्ष्मी पुरिको कप्तानिमा पिएम कपको लागि ‘कर्णाली प्रदेश’ को टिम घोषणा